“ ဆရာမလေး………..ဆရာမလေး ”
အပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ လှေကားပေါ်တက်လာတဲ့ မထားကြည် ။
“ ဆရာမလေး ရေ ..ကယ်ပါအုံး ၊ ဆရာမလေး တပည့် အိသဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေကြောင်းကြံစည်ဖို့ လုပ်နေတယ်”
ဆရာမလေးသိင်္ဂလည်း အပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ အိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့ မထားကြည်ရဲ့ စကားကြားလိုက်သည့်နှင့် တပြိုင်နက် အထိတ်တလန့်ဖြစ်ခါ ထမင်းစားနေရာမှ လက်ထဲက ထမင်းလုတ်ပင် ပြုတ်ကျလုမတတ်ဖြစ်သွားသည်။
“ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ မထားကြည် ရယ် ၊ အထိတ်တလန့် ဖြစ်လိုက်တာ”
“ ဆရာမလေး အမြန်လိုက်ခဲ့ မှ ဖြစ်မယ် နောက်ကျရင် အချိန်မှီမှာ မဟုတ်တော့ဘူး”
မထားကြည်ရဲ့ အလောတကြီးနိုင်ပုံ၊အထိတ်တလန့်စကားလုံးတွေ ကြောင့် သိင်္ဂလည်း ရေဇလုံထဲ လက်ကို ကမန်းကတန်းဆေးနေရင်း ၊ အဒေါ်ဖြစ်သူကို
“ ဒေါ်စန်းရေ သမီး မထားကြည် နဲ့ ရွာ အနောက်ဘက် ပိုင်းကို လိုက်သွား အုံးမယ်၊အိမ်တံခါးတွေ သေချာ ပိတ်ထားအုံးနော်”
ဒေါ်စန်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ စကားကို နားထောင်ချိန်မရတော့ပဲ၊ မထားကြည်က ဆရာမလေးသိင်္ဂီလက် ကို ဆွဲ ပြီး ရွာ အနောက်ဘက်ပိုင်းရှိ အိသဲတို့ အိမ် သို့ အပြေးတစ်ပိုင်း ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်။
“ ဘယ်လို ဖြစ်တာလည်း မထားကြည်ရယ် ကျွန်မကို လည်း အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် လေးရှင်းပြ ပါအုံး၊ မထိတ့်သာ မလန့်သာ ရှိ လိုက်တာ”
“ ဒီလို ဆရာမလေးရေ အိသဲလေး ကျောင်းက ပြန်လာချိန် အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိတုန်း ဟိုဘက်ပိုင်းက မြမောင်က အလိုမတူပဲ သားမယားပြုကျင့် သွားတယ်လေ၊အဲဒါကို ကွင်းထဲ က ပြန်လာ တဲ့ သူ့အစ်ကို အောင်ကြီး က သိတော့ သူ့ညီမကို ယူဖို့ မြမောင်ကို သွားပြောတယ်၊မြမောင်က မယူနိုင်ဘူးဆိုပြီး ဗြောင်ငြင်းတော့ အဲ့ဒီမှာ စကားများရာကစပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ ခြေလွန်လက်လွန်တွေ ဖြစ်ပြီး မြမောင် အဲ့ဒီနေရာမှာ ပဲ ပွဲချင်းပြီးသွားတာပဲ ဆရာမလေးရယ်”
သိင်္ဂီရင်ထဲ စိုးရိမ်တွေ ကြီးစိုးနေခဲ့သည်။
“အိသဲလေး က သူ့ အစ်ကို အောင်ကြီး သူ့အတွက်ကြောင့် လူသတ်မှုဖြစ်၊သူကိုယ်တိုင်လည်း အစော်ကားခံ လိုက်ရတော့ ဒီဘ၀မှာ မနေချင်တော့ ဘူးဆိုပြီး သူ့ကိုယ်သူ သေကြောင်းကြံစည်နေလေရဲ့၊အဲဒါကို သူ့ အဘွားဒေါ်လှစိန်က တွေ့ပြီး ပတ်ဝန်းကျင် ကို အော်ပြီး အကူအညီတောင်းလို့ ကံကောင်းသွားတာပေါ့၊အခုလည်း ဘယ်သူမှ အိမ်ပေါ်အတက်မခံဘူး အိမ်ပေါ်တက်တာနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေမယ်ဆိုပြီး ဓါးကိုင်ကာ နေလေရဲ့”
သိင်္ဂလည်း မထားကြည်ရဲ့ စကားကြားလိုက်တော့ ပိုပြီး ခြေလှမ်းသွက်ခါ အိသဲတို့ အိမ်ဘက်သို့ အပြေးလှမ်းသွားနေခဲ့သည်။
တွေ့ လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက
အိသဲတို့ အိမ်ရှေ့တွင် ရွာသူကြီး၊ရွာသူရွာသားများ စုရုံးနေကြသည်။
“ ဟေ့ ဆရာမလေး လာပြီ ဟေ့ လမ်းဖယ်ပေးကြ ၊ဖယ်ပေးကြ”
အဖွားဒေါ်လှစိန် က ငိုနေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့
“ ဆရာမလေး ရယ် ဆရာမလေး တပည့်အိသဲကို ဖြောင်းဖြပေးပါအုံး”
“ အိမ်ပေါ်တက်ပြီး ဆရာမတပည့် ကို တားပေးပါအုံး ဆရာမလေးရယ် “
ဟု ရွာလူကြီးဦးကြိုင်ကလည်း ရွာသူကြီးတစ်ယောက် အနေနဲ့ မဖြစ်သင့်တာတွေ မဖြစ်စေလိုပေ။
ဒီရွာလေး မှာ သိင်္ဂီလည်း အရေးပါ အရာရောက်သူအနေနဲ့ ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့သည်။ ကျေးရွာသူ၊ရွာသားများ အနေကလည်း လယ်ထဲကွင်းထဲက လွဲ ပြီး ဘာမှ မလုပ်တတ် မကိုင်တတ်ချေ၊ပညာတတ်ရှားပါး တော့ အသိပညာ ဗဟုသုတ နည်းပါး၊ ရိုးသားမှုက လွဲပြီး ၀မ်းစာ အဓိက သင်ကြားတတ်မြာက်ကြသည်။ ဆရာမဆိုတဲ့ဂုဏ်၊ ပညာတတ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်တွေကြောင့် အားထား ယုံကြည်ကြသည်။ ဒီရွာ မှာ အကြောင်းကြီးငယ်ရှိက ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်က ဖြေရှင်းပေးရသည်။ ယခုဖြစ်ရပ်က မိန်းမသား ကိစ္စဖြစ်လေတော့၊မိန်းမသား ချင်းဖြေရှင်းတာ ကောင်းသည့် အတွက် သိဂီင်္ ကို အားကိုး ကြ တာ ဖြစ်သည်။ သိင်္ဂီလည်း အပြေးလာခဲ့ပေမယ့် အမောမဖြေနိုင်သေးချေ၊ အိမ်ပေါ်သို့ အလျင် တက်လိုက်သည်ဆိုရင်ပဲ
“ ဆရာမ ရှေ့ဆက်မလာနဲ့နော်၊ရှေ့ဆက်လာရင် သမီး ဒီဓါးနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေလိုက်မှာ”
သြော် အိသဲလေးရယ် ကျောင်းခန်းထဲမှာ ဆိုရင် သနပ်ခါးပါးကွက်ကြား၊အကျီ င်္ဖြူစိမ်းလေးနဲ့ ကျောင်းသူတပည့် အလိမ္မာလေး၊အခု ဆံပင်တွေ ဖရိုဖရဲ မျက်ရည်တွေနဲ့ မဲညစ်နေတဲ့မျက်နှာ၊ ဖျောင်းဖျဖို့ထက် သိင်္ဂီရင်ထဲမှာ ခံစားမှု တွေ က အတိုင်းအထက်အလွန် ဖြစ်တည်လာပြီး မျက်ရည်တွေ ပင်သူကိုယ်တိုင်ကျဆင်းနေမိသည်။ သမီးလေးရယ်…။
“ ဆရာမရယ် သမီးကို သေခွင့် ပေးပါ၊သမီး အသက်မရှင်ချင်တော့ဘူး၊သမီးဘ၀ ပျက်သွားပြီး ဆရာမရယ်..အဟင့်.ဟင့်..အီးဟီး..ဟီး သမီးသေချင်တယ်၊ကိုကြီးလည်း သမီးကြောင့် လူသတ်မိပြီ ၊ရဲတွေက ဖမ်းခေါ်သွားပြီ၊သမီးဘယ်လို မျက်နှာနဲ့ အသက် ဆက်ရှင်ရမလဲ ဆရာမရယ် ”
သိင်္ဂီမိန်းမသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာမိသည်။အရှက်နဲ့ သိက္ခာ ဆိုတာ မိန်းမသားတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုး ဖြစ်သလို၊သူရဲ့ ဘ၀လည်း ဖြစ်သည်။အဖြူရောင်စာရွက် တစ်ရွက်လို ရေးခြစ်သူရဲ့ အသုံးချမှု ပေါ်မူတည်ပြီး တန်ဖိုးတက်စေတယ်၊ဆုတ်ဖြဲ ချွေမွသူ၊ ညစ်ပက်နေအောင် လုပ်တတ်သူတွေကြောင့် တန်ဖိုးလျော့နည်းသွားပြီး၊ အမှိုက်တစလို နင်းချေခံရသည်။ကိုယ်ကျင့်တရား မကောင်းသူရဲ့ လက်ချက်ကြောင့် ဘ၀ဆုံးပြီ ဆိုပြီး အသက်ပါစတေးခံမယ့် အိသဲလေးကို ဘယ်လို နားဝင်အောင် ဖျောင်းဖျပေးရမလဲ။
“ သမီးလေးရယ် ဆရာမပြောတာသေချာနားထောင်ပေးပါ၊ဆရာမ အနေနဲ့ အိသဲ ကို ကိုယ့်ရဲ့ သမီးလေး တစ်ယောက်လို့ စိတ်ထားနဲ့ပြောနေတာပါ။မိုက်ရိုင်းယုတ်မာတဲ့ လူတစ်ယောက်ကြောင့် သမီးရဲ့အပျိုစင် ဂုဏ်ပျက်စီးခဲ့ရပြီ။ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပြီ။ နောက်ထပ်သမီးက အသက်ကိုပါ ထပ်ပြီးဆုံးရှုံးခံတော့မလို့လား”
“ဆရာမရယ် သမီးဘယ်လို့ မျက်နှာ နဲ့ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေရမှာလဲ၊သမီးအရမ်းရှက်တယ်ဆရာမရယ်”
“ ဆရာမ နားလည်ပါတယ် သမီးလေးရယ် ၊ရခဲ့လှတဲ့ လူ့ ဘ၀မှာ အမှားတစ်ခု ကြောင့် ဘ၀ကို ရပ်တန့် လိုက်တော့မလို့လား၊ဆရာမတို့ မိန်းမသားတွေမှာ အရှက်ကို အသက်ထက် တန်းဖိုးထားတယ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ အခုဖြစ်ရပ်က လည်း သမီးကိုယ်တိုင် အရှက်မဲ့ ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး၊ အမှားပြင်ဆင်ခွင့် ၊ပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ခွင့်တွေ အသက်ရှင်တဲ့ ကာလပတ်လုံး လုပ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။သမီး က သေဆုံးခြင်းနဲ့ ပြဿနာကို ရှောင်ထွက်ပြီး ဖြေရှင်း ရင်တော့ သမီးမှားသွားပြီ ။ထပ်ပြီးတော့ ဆုံးရှုံးသွားပြီ၊ဒီနည်းနဲ့ သုံးလို့ ပြဿနာက ပြီးသွားမှာ လည်းမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်ပြီးခဲ့ပြီး ဘာမှ ပြောင်းလဲ လို့ မရတော့ ဘူး၊အဆိုးထဲ က အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရမယ်။စိတ်ထွက်ပေါက်ကို ရအောင် ရှာရမယ်။ဒီအရိပ်မည်းကြီး ကဘ၀ရဲ့အာနည်းချက်ဆိုရင် အားသာချက်ဖြစ်အောင် သင်ခန်းစာယူပြီး ရှေ့ဆက်လျောက်လှမ်းရမယ်၊ သမီးဒီလို ဖြစ်လို့ ကျောင်းဆက် တက်လို့ မရတော့ဘူးလား၊ဆရာဝန်ကြီး မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလား။ အင်ဂျင်နီယာကြီး မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလား၊သူငယ်ချင်း အပေါင်းအဖော်တွေ မရနိုင်တော့ဘူးလား၊ လင်ကောင်းသားကောင်း မရနိုင်တော့ဘူး၊ ဒီလိုဖြစ်လို့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း က ပစ်ပယ် ထားမှာ လား၊မဟုတ်ဘူး သမီးလေးရယ်၊ သမီးမျော်လင့်ထားတဲ့ ရည်မှန်းချက် အတိုင်းရှေ့ဆက်လျှောက် ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒီလို ဖြစ်လို့ လူဖြစ်ရှုံးသွားတာ မဟုတ်ဘူး ၊လူညွှန်တုံးသွားတာ မဟုတ်ဘူး၊သမီးသာ အသက်ရှင်လျှက် ကြီုးစားမယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ခွင့်တွေ ရှိသေးတယ်။မျော်လင့်ချက်တွေ ရှိနေအုံးမှာပါ။ တဏှာရူးတွေ ရဲ့ လက်ချက်ကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ သာမက ကမ္ဘာ မှာပါ ဒီလို့ ဘ၀တွေ ကြုံတွေနေရတဲ့ မိန်းကလေးရှိတာပဲ။ ဒါကြောင့် သမီး ဒီလို ဆက်မဖြစ်အောင်၊ တစ်ခြားသူတွေ လည်းဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေ နဲ့ မကြုံရလေအောင် သင်ခန်းစာယူပြီး ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့ အားအင်မွေးရမယ်။နွံထဲမှာ နစ်နေပြီဆိုလို့ အားလျော့လိုက်ရင် နစ်သထက် နစ်သွားလိမ့်မယ်။ လူဘ၀မှာ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ၊သူတစ်ပါးကြောင့် ဖြစ်စေ အမှားဆိုတာတွေကို ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ နေရမှာပဲလေ”
သိဂီ င်္ စကားပြောတာ ကို ရပ်လိုက်ပြီး မျက်ရည်တွေနဲ့ စီးကျနေတဲ့ အိသဲလေးကို ကြည့်ပြီး သနားဂရုဏာဖြစ်မိသည်။နုနယ်တဲ့ ဘ၀လေးကို အရောင်တွေ ဆိုးရက်လိုက်ကြတာ။ အိသဲ လေးရဲ့ စီးကျနေတဲ့ မျက်ရည်တွေကို အသာ သုတ်ပေးနေရင်း
“ သမီးလေးအိသဲ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှု တွေ ကို ဆရာမ ကာကွယ်ပေးပါမယ်။ဆရာမနဲ့ အတူ လိုက်ခဲ့ပါ”
သူ့ရဲ့ ဖြောင်းဖြ အားပေးစကားကို အိသဲ လေး နားလည်သွား တဲ့ မျက်နှာလေး ကို တွေ့ လိုက်တော့ သိင်္ဂီလည်း အားတတ်သွားမိသည်။ဒီလို ဖြစ်ရပ်မျိုး ကြောင့် အသက်ကို ပေးဆပ်စတေးခံ မယ့် အားငယ်တတ်တဲ့ မိန်းမသားမျိုး လည်း မဖြစ်စေလိုပေ။အိသဲလေးရဲ့ အားငယ်နေတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို ပြန်လည် အားအင်ဖြစ်အောင် လမ်းမှန်ပို့ပေးဖို့ သူမ အနေနဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာအထိတော့ သူမ အိမ်မှာ ခေါ်ထားရပေအုံးမည်။
“ဟုတ်ကဲ့” ဟု ခေါင်းလေးကို အသာငြိမ့်လိုက်တဲ့ အိသဲလေးကို ရင်ခွင်ထဲကို ထည့်လိုက်ပြီး ကျောလေးကို အသာပွတ်ပေးလိုက်သည်။စရိုက်မျိုးစုံ၊ခံယူချက်မျိုးစုံ နဲ့ လူ့ဘ၀ကြီးမှာ စဉ်းစားဥာဏ်နည်းပြီး၊အတ္တဆန်တဲ့ တဏှာရူးတွေ ရဲ့ လက်က လွတ် အောင် ပြီးတော့ ဒီလို စရိုက်မျိုး နဲ့ စိတ်ထားမျိုးတွေ ကင်းအောင် ၊ သူကိုယ်တိုင် ဆရာမ တစ်ယောက် အနေ နဲ့ နောင် အနာဂါတ် ရဲ့ ကလေးတွေ ကို စာသင်ခန်းထဲ မှ စ၍ သင်ခန်းစာ တစ်ခု အနေနဲ့ ထည့်သွင်း သင်ကြားပေးရမည့်ဟု လည်း ခံယူထားလိုက်သည်။
ရေးသားသူ မင်းသျှင် at Thursday, March 19, 2015 1 comment: Links to this post
ဇော်မိုးရဲ့ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံကို ကျွန်တော် အပါအ၀င် သူငယ်ချင်းများပါ အံသြနေမိသည်။ ဒီလောက်ထိ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ မထင်ခဲ့ဘူး။ အရင်ကဆို သူငယ်ချင်းတွေ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် သွားမယ်ဆိုရင် စုရပ်မှာ အရင်ရောက်နေပြီး၊ ကျန်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းအိမ်တွေကို လိုက်ခေါ်ပြီးမှ လူစုံပြီဆို လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကို သွားနေကြ။ ဒီကောင်အိမ်ထောင်ကျပြီး နောက်ပိုင်း သူငယ်ချင်းတွေဆီကို အလာကျဲသွားတယ်။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သွားဖို့ ခေါ်ရင်လည်း တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု အကြောင်းပြပြီး ငြင်းနေခဲ့သည်။ အရင်ကဆို ရန်ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်လည်း ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံလုံလုံလောက်လောက်ပါမှ သွားတဲ့ကောင်၊ အခုတော့ အလုပ်သွားရင် ကားခအသွားအပြန်နဲ့ ကွမ်းယာဖိုးလောက်သာ ပါသည်။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ရင် အရင်လို လက်ဘက်ရည် မသောက်တော့ဘူး.။ မနေ့က အဖြစ်အပျက်က ပိုပြီးထူးထူးခြားခြားနဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ကို လှုပ်ခတ်သွားစေသည်။ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အကျင့်က သူငယ်ချင်းတွေ အတူတူသွားပြီးဆိုရင် လမ်းပေါ်မှာတွေ့သမျှ ပစ္စည်းတွေကို အလုအယက်ကန်ကြသည်။ ပလတ်စတစ်အိတ်တွေ့ရင်လည်း ခြေတစ်ဖက်က ပလတ်စတစ်အိတ်ကို လေလုံအောင်နင်းထားပြီး ကျန်တစ်ဖက်နဲ့ အသံမြန်အောင်ဖောက်လေ့ရှိတယ်။ မနေ့က သူငယ်ချင်းတွေ တူတူပြန်လာတဲ့အခါ လမ်းအလယ်ခေါင်မှာ ဗူးတစ်ဗူးကို လှမ်းတွေ့တော့ သူငယ်ချင်းတွေ ပြိုင်ပြေးပြီး ကန်ဖို့ပြင်ကြသည်။ အဲဒီချိန်မှာ ဇော်မိုးက ဗူးကို အလျင်အမြန် ကောက်ယူလိုက်ပြီး သူ့ပုဆိုးအောက်နားစနဲ့ ပေနေတဲ့ဗူးကို သုတ်နေသည်။ ကျွန်တော်တို့က “ဟေ့ရောင် ဇော်မိုး ဘာလုပ်တာလဲ မညစ်ပတ်နဲ့ကွာ” “ ပြန်ချလိုက် ကွာ ” ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ သူ့ဆီက အတင်းလုတော့ သူက
“ဒီနို့ဆီ ဗူးခွံလေးကို ငါမကန်ချင်ဘူးကွာ။ ဒီနို့ဆီဘူးခွံလေးရဲ့ အပေါ်ပိုင်းကို သံမတလင်းနဲ့တိုက်ပြီး ခွာလိုက်ရင် ငါ့အိမ်မှာ ဆန်ချိန်လို့ရတယ်။ ငါ့အိမ်အတွက် ဆန်ချိန်တဲ့ ခွက်လေးရတယ် ” ကျွန်တော် အပါအ၀င် သူငယ်ချင်းများက ဇော်မိုးကို တအံတသြ ငေးကြည့်နေမိသည်။
“ ငါအရင်လို ပေါ့ပေါ့နေလို့မရတော့ဘူး သူငယ်ချင်းတို့ရာ၊ ငါအခု အိမ်ထောင်တစ်ခု ထူထောင်ထားတယ်၊ ငါ့အိမ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေက အိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုတဲ့ ငါ့အပေါ်မှာ တာဝန်ရှိနေတယ်။ ငါချစ်လို့ယူထားတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ငါ ရိုးသားစွာဖြင့် တင့်တောင်းတင့်တယ် ထားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ မင်းတို့ကတော့ ငါ့ကို တစ်မျိုးမြင်ကြမှာပါ။ အရင်ကဆို ဒီလိုပစ္စည်းလေးတွေက ငါ့အတွက် အသုံးမ၀င်ခဲ့ဘူး၊ အသုံးမ၀င်ဘူးဆိုတာထက် ငါတို့အသုံးမပြုတတ်ခဲ့တာပါ။ အခုဆို လမ်းမှာတွေ့တဲ့ သစ်ကိုင်းခြောက်တွေက အစ ငါ့အတွက် အသုံးဝင်လာခဲ့ပြီ ”
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စား မိဘအိမ်မှာနေခဲ့ကြသည်။ မိသားစုတွေက သာမန်အခြေခံလူတန်းစားတွေ၊ ရုန်းကန်ပြီး မှ ဘ၀ကို ရှင်သန်နေကြရသည်။ ဇော်မိုးရဲ့စကားတွေက ကျွန်တော့်နှလုံးသားထဲထိ စိမ့်ဝင်လာသည်။
ကျွန်တော် နောက်နှစ် မိန်းမယူဖို့ အဖေ့ကို ပြောတုန်းက
“ သား မိန်းမယူမယ်ဆိုရင် အဖေ့ အနေနဲ့ ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။ သီးချိန်တန် သီး၊ ပွင့်ချိန်တန် ပွင့် တာ သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်တစ်ခု ထူထောင်တော့မယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုမယ်လို့ စဉ်စားလိုက်ပြီဆိုတာ နဲ့ ကိုယ့်မှာအိမ်ထောင်ဦးစီး တစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေရှိနေပြီလား ဆိုတာကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ် ”
အဖေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေနဲ့ ဇော်မိုးရဲ့အပြုအမှုတွေကြောင့် ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် ပြန်မေးခွန်းထုတ်နေမိသည်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သမရိုးကျတစ်ခုလို့ထင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုက အခုအရေကြီးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော့်မှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေရှိနေရဲ့လား။ အတွေးတွေနဲ့ ချာချာလည်လည်နေမိသည်။
ကျွန်တော်ချစ်လှစွာသော သိင်္ဂီ၊ ကျွန်တော့်ကို သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သိင်္ဂီကရော ကျွန်တော့်အပေါ် ဘယ်လိုမြင်မလဲ။
“ သိင်္ဂီကိုယ့်မှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေရှိနေတယ်လို့ထင်လား ”
ကျွန်တော့်ရဲ့ မေးခွန်းကို အထူးအဆန်းဖြစ်သွားပုံရသည်။
“ ဘာဖြစ်လို့ မေးတာလဲ ကိုကိုရယ် ”
“ ကိုကို မေးတာပဲဖြေပေးပါ ”
“ ကိုကို ဟာ သိင်္ဂီ့ အတွက် ချစ်သူကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ယုံပါတယ်။ ဒါဆိုရင်သိင်္ဂီကိုလည်းကိုကိုဖြေပေးပါ။ သိင်္ဂီမှာရော အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိနေလားဆိုတာ ”
ကျွန်တော်လည်း မဆိုင်းမတွ ပြန်ဖြေလိုက်သည်။
“ သိင်္ဂီက ကိုကို့အတွက် ချစ်သူကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကိုကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုကိုတို့တွေ ချစ်သူဘ၀မှာချစ်သူကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းလိုအပ်သလို အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်လည်း အိမ်ထောင်ရှင်ကောင်း ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တယ် ”
“ကိုကို ရယ် ကိုကိုပြော မှ သိင်္ဂီအတွေးတွေထဲ အလင်းတန်းတစ်ခု စီးဆင်းသွားသလိုပဲ။
သိင်္ဂီတို့တွေ နောက်နှစ်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ပိုက်ဆံစုရုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။ အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်း၊ အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်းတွေ ဖြစ်ဖို့လည်း ကြိုးစားရမယ် ”
“ ဟုတ်တာပေါ့ သိင်္ဂီရယ် ကိုကိုတို့တွေ နောက်နှစ်အတွက် ပိုက်ဆံတွေစုပြီးတော့ အိမ်ထောင်ရှင်ကောင်းဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားကြမယ်။ အိမ်ထောင်ပြုပြီးတော့ သားသားမီးမီးလေးတွေ ရလာတဲ့အခါ ဖခင်ကောင်း၊ မိခင်ကောင်း ဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားရအုံးမှာပေါ့ ”
“ ဟာ ကိုကို ကလည်း ဘာတွေပြောနေတာလဲမသိဘူး ။ နားရှက်စရာ ”
ချစ်သူရဲ့ ပါးလေးတွေနီပြီး ရှက်နေတဲ့ဟန်လေးကို ကျွန်တော် မပြုံးဘဲမနေနိုင်တော့ချေ။ ဖက်ထားသော လက်ကို ပိုမိုတင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားလိုက်မိတော့သည်။
ရေးသားသူ မင်းသျှင် at Saturday, December 13, 2014 No comments: Links to this post
လူရာဝင်ဖို့ငွေးကြေးက အမြဲတမ်း
ပွဲ ထွက် စာရင်းမှာပါတယ်။
'ဒီနေ့စလုံးက သူငယ်ချင်းက သူညီမကို ပေးဖို့လက်ဆောင်ပစ္စည်း ပို့ လိုက်တာ သွားထုတ်ရအုံးမယ်"
လို့လင်းဦး စဉ်းစားနေမိတယ်။
ဒီနေ့ ရုံးနေ့ တ၀က် နားပြီး သွားထုတ်ရင် ကောင်းမယ်။မနက်ဖြန်ဆို ရုံးပိတ်ရက် ၂ရက်ခံနေပြီး။
လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံက လည်း ပြန်ဖို့လမ်းစရိတ် ၂၀၀ပဲ ရှိတယ်။ဒါက တော့ ပုံမှန်ဖြစ်နေကျ သိပ်တော့ပြဿနာ မရှိဘူး။
လစာက တစ်လစာအတွက် နင်လား ငါလား လို့တောင်မမေးရဲဘူး။
တလ တလ အဆောင်စရိတ် ထမင်းဖိုး နဲ့ရုံးသွား ရုံးပြန်စရိတ် ကို ဒီလို ပဲ အဆင်ပြေ အောင်သုံးနေရတယ်။
အင်း ပစ္စည်းသွားထုတ်ရင် ပိုက်ဆံ ပေးရမလားမသိဘူး။
သွားထုတ်ယုံပဲ ပိုက်ဆံ ပေးစရာမလို့ဘူး။ဟိုဘတ်မှာ အကုန်ပေးပြီးသားဆိုပဲ။
ဒီလို့ နဲ့ စာတိုက် မှာ မှတ်ပုံတင်ပြ ပြီးထုတ်တော့ ရောက်နေပြီး။ကောင်တာ မှာ ထုတ်ထားတဲ့ ပါဆယ်ကို ပြတယ်။ဟို ဘတ်မှာ အဆင့်သင် လုံခြုံအောင် ထုပ်ထားတဲ့ပါဆယ်ထုပ်ကို ဖြေပြတယ်။ပစ္စည်းစုံ ရဲ့ လား တဲ့။
ကို ကလည်း ဘာပါလို့ လာမှန်းမသိတော့ ဟုတ်ကဲ့ ပဲ ပြောလိုက်ရတယ်။ဘာလို များ ပစ္စည်းတွေ ကို ဖောက်ထုတ်ပြီး
တစ်ခု ချင်း ထုတ်ရတာလဲ မသိဘူးလို့ စဉ်စားနေမိတယ်။ဟိုဘတ်မှာ တစ်ခါ တည်း ထုပ်ပြီး ပို့လိုက် တဲ့ ဟာပဲ။
အော် သူတိုလည်း သူတို့ တာဝန်အရ ပစ္စည်း အရေတွက် မှန်လားဆိုတာ ထုတ်ပြတာပဲ လေ လို့ ပဲ တွေးလိုက်တယ်။.
ရင်ဘတ်ထဲကို အလုံးကြီး တက်သွားသလို့ ပဲ ခံစားရတယိ။ပိုက်ဆံမပါလာဘူး ဒုက္ဖ ပဲ။
ဟို ဘတ်က အကုန်ပေးပြီး ပြီးလို့ ပြောတယ် ဗျ။အဲဒါကြောင့် ကျနော်မှာ ပိုက်ဆံ အပို မပါလာဘူးဗျ။
"မရဘူးညီလေးရ ။ဒါမြန်မာပြည် ဘာမှအလကားမရဘူး။"
ကောင်တာ လူကြီး ပြောတယ်။
ဟူး ရှက်တောင်ရှက်တယ် လူတွေ က ၀ိုင်းကြည့်နေတာ။မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ အရှက်တော့ ကွဲ ပါပြီး။
ဒါတောင် ကောင်တာ လူကြီးက ထပ်ပြော လိုက်သေးတယ်။ညီလေး ရဲ့ သူငယ်ချင်းကို ပြောလိုက် ဒါမြန်မာပြည့် လို့ ဘာမှ အလကားမရဘူး တဲ့
တနလာင်္ နေ့ မှ ပဲ လာ ထုတ်တော့မယ့် ။ဒီလိုနဲ့ အိတ်ထဲ က ကားခ ပိုက်ဆံ ကို အသာစမ်းကြည့် ပြီး ကားဂိတ်ဆီ ကို ထွက်လာခဲ့တယ်။
"မောင်လေးရယ် ပိုက်ဆံ ရှိရင် အမ ကို ပိုက်ဆံ ၂၀၀ လောက်ပေးခဲ့ ပါနော်
အမ ပိုက်ဆံ ကားပိုက်နှိုက်ခံ ရလို့ ကားခ မရှိတော့ လို့ ပါ ကွယ်."
ငိုမဲ့ မဲ့ မျက်နှာ လေးနဲ့ အသက်အရွယ်က ၃၅နှစ် ကျော်လောက် အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက် ပိုက်ဆံ လာတောင်းနေတာ။ပုံစံ ကတော့ သနားစရာ
ကိုယ်မှာ ပါတဲ့ ကားခ ၂၀၀ ကျပ် ကို အသာစမ်းကြည့်မိပြန်တယ်။ အင်း ငါပေးလိုက် ရင်လည်း ငါလည်းသူလို့ လိုက်တောင်းနေရအုံးမယ်။
အင်း ကိုယ်မှာက ကားခ ၂၀၀ ပဲ ကျန်တယ် ။အပို မပါလာဘူး။
အမ ရယ် ကျနော် မှာ လည်း အပို မပါလာလို့ ပါဗျာ လို့ ပြောပြီး လျောက်လာခဲ့တယ်။ ရင်ထဲ မှာ တော့ မကောင်းဘူး။သူက မိန်းမသားတစ်ယောက်ပဲ
ပိုက် ဆံ တောင်းလို့ မရရင် အချိန်ကြာလာလို့ကားခ မရှိရင် ဘယ်လို ပြန်မလဲ ဘယ်လို နေမလဲ ရန်ကုန်မြို့ ထဲ မှာ လူပေါင်းစုံ နဲ့ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ၀င်လာခဲ့တယ်။
ဘယ်လို ကူညီ ရမလဲ အပူပြင်းစဉ်စားလိုက်တော့ ဟာ ဟုတ်ပြီ ဒီချိန်ဆို နေလင်း ရုံးမှာ ပဲ ရှိအုံးမယ် သူဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီးအကူညီတောင်းလို့ ရတာပဲ။
အိတ်ထဲ က ပိုက်ဆံ ၂၀၀ကျပ်ကို ထုတ်ပြီ စောနက အဒေါ်ကြီး ဆီလျောက် လာခဲ့တယ်။မှတ်တိုင်မှာ ရပ်နေတဲ့ အဒေါ်ဆီကို
သူက ကြောင်ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ကျနော်ကို ပြန် ကြည့် တယ် ။ပြီး မှ အော် မရသေးပါဘူး မောင်လေးရယ်တဲ့ ကျနော် လည်း နောက်ဆုံးလက်ကျန် ကားခ ၂၀၀ကျပ်ကို အဒေါ်ကြီး ကို ပေးလိုက်တယ်
ကျနော် လည်း ၇ှိလို ပေးတာမဟုတ်ဘူး အဒေါ်ကြီး အပြန်ဒုက္ဖ ရောက်မှာစိုးလို့ ပေးတာပါ။
ဟူး သူအတွက်တော့ ပြီးသွားပြီး နေလင်းဆီ ဖုန်းဆက်အုံးမှ(ပြောမယ်ဆို လည်းပြောချင်စရာ ဖုန်းတစ်လုံးတောင်ပိုင်ပြီး ကားခ ၂၀၀တောင် မရှိပါလားဆိုတာ ရတဲ့ လစာက
အဆောင်စရိတ် ထမင်းဖိုး နဲ့ရုံးသွာ ရုံးပြန်စရိတ် ပိုလျှံတယ်မရှိဘူး ဒါတောင် သူများဆီ ကြိုတင်ချေးငှားနေရတဲ့ ဘ၀.
ဖုန်းတောင် အလုပ် က အရစ်ကျ ပိုက် ဆံ သွင်းပြီး ၀ယ်ရထားရတာ။)
ဟာ ဒုက္ဖ ပဲ ဖုန်းက လည်း ဆက်သွယ်မှုဧရိယာ ပြင်ပ ဆိုတာချည်းပဲ
ဖုန်းတွေ က တစ်ခါ တစ်ခါ ညာတက်တယ် ဘေးနားမှာ ရှိပြီးတော့ လည်း ဧရိယာ ပြင်ပ လုပ်တက်တာပဲ
ဒီလိုနဲ့ ၇ခါ၈ခါလောက် ခေါ်ပြီးတော့ ဖုန်းဝင်သွားတယ်
"ဟလို နေလင်း လား ငါ လင်းဥိးပါ "အကျိုးအကြောင်း ရှင်းပြလိုက်တော့
"အေး သူငယ်ချင်း ငါအခု အစည်ဝေး ခန်းထဲ မှာ ရောက်နေတယ် နောက်တစ်နာရီလေောက်ဆို အားပြီး ငါလာခဲ့မယ်
မင်း မဟာဗန္နလပန်းခြံ ရှေ့ မှာ စောင့်နေ နော်။"
ဒီလို နဲ့ ပန်ခြံရှေ့ မှာ ရပ်စောင့်နေခဲ့တယ်။အိမ်ပြန် ရင် တော့ မနက်က ချက်ထားတဲ့ ချဉ်ပေါင်ရွက် ဟင်းချိုကို ပြန်နွေးပြီး
ကျန်တဲ့ ကြက်ဥတစ်လုံးကြော်လိုက်ရင်တော့ ညစာတော့ အဆင်ပြေပြီး။
ဘ၀ ဘ၀ ပိုက်ဆံ ၇ှာရတာ ဘာကြောင့် များဒီလောက်ခက်ရတာလဲ
ရှိတဲ့ သူများတော့ ပိုလျှံ လို့မရှိတဲ့ သူများ တော့ ၂၀၀ တောင် ခက်ခက်ခဲခဲ ။မညီမျှလိုက်နော် ။
အင်း စိတ်ထဲ က လည်း ဘာတွေ တွေးနေမိပြန်လည်းမသိပါဘူး။ကိုယ်ဘာသာ ညည်းညူးမိတယ်။
ဂွီးးး ဂွီးးး ဂွီးးး
ဟာ ဒုက္ခပဲ အရေအကြောင်း ဒိန်းဒေါင်း ဖျက်ပြီး ဆိုတာကို ပြန်ပြင်ပြောရမယ်ဆို ရင်
အရေးကြောင်းဆို ဗိုက်က ရစ်ပြီ နာလာတယ်
အိမ်သာတက်ချင်လာတယ်။အဲဒါမှ ပြဿနာ အကြီးကြီးတက်တာပဲ
အိမ်သာတက်ရင် ပိုက်ဆံ ၁၀၀ကျပ်ပေးရမယ်။
စာတိုက် က လူကြီးပြောတာကို ပြန်သတိရမိတယ်။ညီလေး ဒါမြန်မာပြည်ကွ ဘာမှ အလကားမရဘူး
ဟူး စိတ်ကို အတည်ငြိမ်ဆုံဖြစ်အောင် ထိန်းလိုက်တယ်
အာရုံပြောင်းမှ ဖြစ်မယ် ဒါမှ ကိစ္စက အနစ္စ မရှိမှ ဖြစ်မယ်
အရှက်တွေ တော့ ကွဲ တော့ မလားမသိဘူး
အိမ်သာ ဆီကိုပြေးပြီး တောင်းပန်ပြီး တက်ရင် ကောင်မလား
တက်ခ က ၁၀၀တောင်ပေးရမှာ
အားကို ပြန်တင်း လိုက် အဲ မဟုတ်သေးဘူး စိတ်ကို လျော့ ရမယ် ယောက်ယှက် ခတ်နေမိတယ်။
ချွေးတွေ ပြန်လို့ 
လိပ်ဖြစ်တာ တောင် ခေါင်းမပြူ ရဲ တဲ့ ဘ၀ ပါလားနော်.
အဲဒီချိန်မှာ ပဲ ဟေ့ရောင် လင်းဦး ဘာဖြစ်နေတာလဲ
ကြည့် လိုက် တော့ ကယ်တင် ရှင် နေလင်း ရောက် လာတယ်
ဘာမှမပြောနဲ့ ငါကို ပိုက်ဆံ ၁၀၀အရင်းပေး ဆိုပြီး သူဆီက ယူပြီ အပြေးနှင်းရတော့ တယ်
တော်ပါသေးတယ် လူကရှင်းနေလို့ .
ကိစ္စက အနိစ္စဖြစ်သွားတော့ ပေါ့ပါလွတ်လပ်စွာဖြစ် လျောက်လာခဲ့တယ်။
"ဘယ်လို တွေ ဖြစ်နေတာလဲ မင်းကြည့် ရတာ ယောက်ယှက်ခတ်နေတာ ပဲ"
နေလင်းက ကျနော် အဖြစ်ကို မေးတယ်။
ဒီလို သူငယ်ချင်းရ ဆိုပြီး ဇာတ်ကြော ကို အသာပြောပြလိုက်တော့
မင်းမရယ် နဲ့ ငါမှ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင် နဲ့ ဘာမှ လုပ်လို့ မရဘူး
အော်ခေါ်ပြီး အကူညီတောင်းလို့ လည်းမရဘူး..
အခု သံပြိုင် နှစ်ယောက် ရယ်မိတယ်.အခု မှ ပဲ ရယ်နိုင်တော့ တယ်။
"အကို ကြီးတို့ ရယ် အမ ကို ကားခ လေး၂၀၀လောက်ပေးပါနော်
အမ ပိုက်ဆံ ခါပိုက်နှိုက်ခံ ရလို့လမ်စရိတ် မရှိတော့ ပါကွယ်"
နေလင်း ဘေးက နေ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ပိုက် ဆံ တောင်းနေတယ် ကျွန်တော့ ကြည့်လိုက်တော့
"ဟာ! အမ ခု န ကျနော် ၂၀၀ ပေးလိုက် တယ် အဲဒါပျောက်သွားလို့လား" လို့ ပြောလိုက်တော့
ဘာမှ မပြောပဲ တစ်ခါ တည်း အပြေးထွက် သွားတယ်။
လင်းဦး မင်းသူကို သိလို့ လား
သိတာပေါ့ ကွ ငါ မှာ ကားခကျန်တဲ့ ၂၀၀ ကို သူကို ပေးလိုက်တာ
သူက မိန်းမသားဖြစ်နေလို့ငါမှာ အကူညီ မင်း၇ှိသေးတယ် ဆို ပြီး သူကို ငါရဲ့ လက်ကျန်ကားခကို သူကို ပေးလိုက်တာပေါ့ ကွ
အင်း လင်းဦး လင်းဦး မင်းက တော့ ကွာ ဒီလိုပဲ လိမ်လည်ပြီးတောင်းတဲ့ သူတွေ က အများကြီးပဲ ကွ
ဒီလို မှ မတောင်းရင် သူတို့ ပုံစံ နဲ့ ပိုက် ဆံ ဘယ်သူမှ မပေးဘူးလေ
ဟာ မိုက် ရိုင်းတယ် ကွာ ငါမှာ တော့ တကယ် လိုအပိတယ် ထင်လို့ ငါရဲ့ ကားခ လက်ကျန်လေးကို သူကို ပေးလိုက်ရတယ်။
ဒီလို လူမျိုးတွေ များလာရင် မကောင်းဘူးကွ
ဘာဖြစ်လို့ လဲ လင်းဦး ရ
ဒီနေ့ နေလယ်က စာတိုက် ကို သွားတော့ စာတိုက် ကောင်တာက လူက ငါကို ပြောတယ်
ဒါမြန်မာပြည်တဲ့ ဘာမှ အလကားမရဘူးတဲ့
ငါတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ က သူတစ်ပါးလူမျိုးတွေ နဲ့ စာ ရင် ပေးကမ်းရက်ရောတက်ကြတယ်
ပေးရင် လည်း အလှူ သဘောမျိုး စိတ်ရင်းနဲ့ ပေးကမ်းတက်ကြတယ်
ဒီလို လိမ်လည် တောင်းနေမယ်ဆိုရင် တကယ် အကူညီလိုအပ်တဲ့ လူတွေရှိရင် ဘယ်လို ကူညီကြမလဲ
ဒီလိုတွေ သာ လိမ်လည် ယူနေကြရင် ကူညီတဲ့ လူတွေ ကလည်း မကူညီချင်ကြတော့ ဘူး
အလှူလုပ်ချင်တဲ့ လူတွေ က လည်း မလှူချင်ကြတော့ ရင် နောက်ဆို ဟိုလူပြောသလိုပဲ
ဒါ မြန်မာပြည့် ကွ ဘာမှ အလကားမရဘူးဆိုတာ ဖြစ်နေမယ်။
မြန်မာပြည့်လောက် ပေးကမ်းစွန့်ကြဲ တဲ့ အပေးအကမ်းရက်ရောတဲ့ စေတနာ သဒ္ဒါတရားရှိတဲ့နိုင်ငံ ကမ္ဘာမှာ မရှိပါဘူးကွာ။
အကူညီတကယ် လိုအပ်ရင် ရွှေမြန်မာတွေ က ကူညီဖို့ဝန်မလေးတက်ပါဘူး။
လိမ်တာကို တော့ မုန်းတယ်။
အဲဒီအယူဆလေးတွေ ပျောက်သွားမှာ စိုးတယ်။“
ဒါတွေ က လည်း မြန်မာပြည့်ရဲ့ ချစ်စရာ ဓလေ့ လေးတွေ ပါ။
အခု လို လိမ်တာတွေ ကြောင့် မြန်မာတို့ ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့ လေးတွေ ပျောက်ပျက်သွားမှာ စိုးရိမ်မိတယ်။
ရေးသားသူ မင်းသျှင် at Tuesday, January 07, 2014 No comments: Links to this post
“ မမနွယ် ကို မေမေ ကတွေ့ချင်လို့တဲ့”
နွယ့်ရင်ကို လှုပ်ခတ်စေတဲ့ စကားဖြစ်ပေမယ့် ရင်ခုန်သံကို ထိန်းပြီး
“ မောင် ကရော ဘယ်လိုထင်သလဲ… မောင့် မေမေက မမနွယ်မှာ ကလေးရှိတယ် ဆိုတာ
သိထားတယ်နော်.. တစ်ကယ်လို့ မောင်နဲ့ မမနွယ်ကို သဘောမတူရင် မောင်ဘယ်လို စဉ်းစားထားလဲ မောင် ”
ဒီမေးခွန်းလေးကို နွယ်ရင်ခုန်သံတွေ ရပ်တန့်ပြီး မေးခဲ့ရပါသည်။
မောင့်မျက်နှာ က အရင်လို လတ်ဆတ်မနေခဲ့ပေမယ့် မောင်ဟာ မမနွယ်ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ အမြဲလတ်ဆတ်နေတဲ့ အချစ်တွေနဲ့ပါ မောင်ရယ်။
“ မောင်တို့ မေမေနဲ့ အရင် တွေ့ကြတာပေါ့ မမနွယ်ရယ် ”
မောင်ရယ်… အင်အားတွေ မရှိသလိုပါပဲလား။ နွယ် တိုးတိုးလေး ဖွ ညည်းမိသည်။
“ နွယ်သခင်နော် ”
“ ဟုတ်ပါတယ်… အန်တီ ”
“ သမီးရဲ့ သားက အသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ”
“ ၁.နှစ်ကျော်ပါပြီ ရှင် ”
“ ဟုတ်ပါပြီ…. အန်တီ့ အနေနဲ့ပြောရရင် အန်တီရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားလေးကို အကောင်းဆုံး၊ အတင့်တယ်ဆုံး အရာတွေပဲ ပိုင်ဆိုင်စေချင်တာ အန်တီ့ရဲ့ ဆန္ဒပါ… အခုတော့ သားက အန်တီဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို သဘောကျနေပြီ။ သားရဲ့ အချစ်ကို ဘယ်လိုမှ တားဆီးလို့ မရနိုင်တဲ့ အဆုံး သမီးကို အန်တီ ခေါ်တွေ့ရတာပါ။ ”
“ ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ”
“ အန်တီဖြစ်စေချင်တာက သမီးရယ်… မင်္ဂလာဆောင်လို့ သားရဲ့ ဘေးမှာ သူချစ်တဲ့သူ တစ်ယောက်ပဲ ရှိနေတာကို မြင်ချင်တယ်…. တစ်ခြား အပိုတွေကို အန်တီ မမြင်ချင်ဘူး။ ရှင်းရှင်းပဲ ပြောမယ် သမီးရယ်… အန်တီ့သားနဲ့ လက်ထပ်ပြီးရင် သမီး တစ်ဦးထဲကိုပဲ လက်ခံမယ် ”
“ ရှင် ”
“ ကလေးကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ရှင် ”
“ အပြစ် မရှိတဲ့ကလေးကို သမီး ဘယ်သူတွေနဲ့ ပြစ်ထားခဲ့ရမလဲ အန်တီရယ် ”
“ ဟုတ်ပါတယ်… သမီး… အပြစ်မရှိဘူး ဆိုပေမယ့် အဲဒီ့ကိစ္စက အန်တီတို့ အတွက်တော့ အပြစ်တစ်ခုလိုပါပဲ”
မောင့်ကို အားကိုးတကြီး လှမ်းကြည့်လိုက်ပေမယ့် မောင်ကတော့ မောင့်မေမေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ထပ်တူကျတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ပါလား မောင်။
နွယ်နဲ့ ချစ်ခဲ့တုန်းက မောင်မစဉ်းစားခဲ့ဘူးလား မောင်ရယ်… နွယ်မောင့်ကို ပြောခဲ့ဖူးတယ်လေ… မမနွယ်တို့ လက်ထပ်ပြီးရင် သားလေးနဲ့ အတူနေမယ်ဆိုတာလေ… အဲဒီတုန်းက မောင် ပြုံးပြီးခေါင်းငြိမ့်ခဲ့တယ်လေ… မောင် မေ့ပစ်လိုက်ပြီလား မောင်ရယ်။
နွယ် စိတ်ကို အတည်ငြိမ်ဆုံး ထိန်းပြီး မောင့်ကို မေးလိုက်သည်။
“ မောင်ရော… ဘယ်လို စဉ်းစားထားလဲ… မောင် ”
မမနွယ်ကတော့ သားလေးကို ပြစ်ပြီး မထားရက်ခဲ့နိုင်ဘူး မောင်။
“ မောင် က မေမေ ပြောတဲ့ စကားအတိုင်းပဲ ဖြစ်ချင်တယ်…. မမနွယ် ”
မောင့်ရဲ့ အဖြေက သူ့မေမေရဲ့ သဘောဆန္ဒအတိုင်းပါပဲလား…
ပြောင်းလဲလို့ မရတဲ့ အခြေအနေမှာ နွယ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ချလိုက်ပါတော့တယ်…
“ မမနွယ် သားလေးနဲ့ ခွဲပြီး မနေနိုင်ပါဘူး… ပြစ်လည်း ပြစ်မထားရက်နိုင်ဘူး… မမနွယ် သွားခွင့်ပြုပါ ”
မောင်လည်း မမနွယ် နောက်ကို ဆက်မလိုက် ခဲ့ဘူးနော်… ပြတ်သားနိုင်လိုက်တာ မောင်ရယ်။
နွယ့်ရင်ထဲမှာ မိခင်မာနတွေနဲ့ မောင့်မေမေရဲ့ရင်ထဲမှာလည်း မိခင်မာန အပြည့်နဲ့ မောင့်ရင်ထဲမှာရော အချစ်ဆိုတဲ့ အတ္တတွေနဲ့ ပေါင်းစည်းထားတဲ့ အချစ်မာန အပြည့်နဲ့ မာနတွေအပြိုင်အဆိုင် အားပြိုင်ခဲ့ကြတာပေါ့။
အခုဆို သားလေးက ၂၀ကျော် ၂၅.ထဲရောက်နေပြီလေ။
မောင်နဲ့ လမ်းခွဲပြီး သားလေးလင်းလက် နဲ့ ဘ၀ကို အဖေါ်မပါဘဲ လျှောက်လှမ်းခဲ့တယ်…
ခုဆို သားလေးက ၀ါသနာပါရာ လူတွေရဲ့ အသက်တွေကို ကယ်တင်နိုင်တဲ့ ဆရာဝန်ကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ… နွယ့် ဘ၀လေးလည်း အေးချမ်း တည်ငြိမ်လာခဲ့ပြီလေ…
ခုတော့ သားလေးက “ မေမေ သားချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်တော့မယ်” တဲ့…
ဒီနေ့ သားချစ်သူနဲ့ တွေ့ဖို့ ပြင်ဆင်နေရင်း အတိတ်ဆီကို လွင့်မျောနေမိတာ…
“ မေမေ… မေမေ သားတို့ ရောက်ပါပြီ ”
ဒေါ်နွယ်သခင် မြင်မြင်ချင်းပဲ သား အရွေးတော်လိုက်တာ လို့ ချီးကျူးမိတယ်…
မိန်းကလေးက ဖြူဖြူချောချော သန့်သန့်လေး။
“ သမီး နာမည် က ”
“ ချောကလျာပါ ရှင့် ”
“ သမီး မိဘတွေကရော ”
“ မေမေကတော့ သမီးငယ်ငယ်လေး ကတည်းက ဆုံးသွားပါပြီ… အခု ဖေဖေနဲ့ အတူနေပါတယ်… ”
“ သြော်…. အန်တီ့အနေနဲ့ကတော့ သားကလည်း ချစ်မယ်… သမီးကလည်း ချစ်တယ် ဆိုရင် အပျို နဲ့လူပျို ဘာမှပြောစရာ မရှိပါဘူး ကွယ် ”
“ ဟုတ်… ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ”
“ ကလင်… ကလင်… ကလင်… ”
“ အန်တီ နွယ်သခင်လား မသိဘူး ”
“ အန်တီ… သား လင်းလက် သူငယ်ချင်းပါ… နာမည်တော့ မပြောတော့ပါဘူး… အန်တီ… ချောကလျာက အပျို မဟုတ်ဘူး အန်တီ… အိမ်ထောင်ကျဖူးတယ်… အိမ်ထောင်ကျပြီး ၁.နှစ်လောက်မှာ သူ့ယောက်ျားဆုံးသွားခဲ့တာ အန်တီ… သူ့မှာ သမီးလေး တစ်ယောက်ကျန်ခဲ့တယ်… အဲဒါ လင်းလက်လည်း သိတယ်… ကျနော်တို့ ဘယ်လိုမှ ပြောလို့မရတော့လို့ အန်တီ့ ကိုပြောရတာပါ… အန်တီနဲ့ မိတ်ဆက်ပြီးပြီလို့ သိရပါတယ်… ”
“ အေး… အေး… ကျေးဇူးပါပဲကွယ် ”
နွယ်သခင့် ရင်ကို လှိုင်းကြမ်းကြမ်း ဖြတ်ခတ်သွားသလိုပါပဲ။
နွယ့်မှာတော့ သားကို ယုံစားစွာ ချောကလျာရဲ့ နောက်ကြောင်း၊ မိဘ၊ မိသားစုအခြေအနေ ဘာကိုမှ မမေးခဲ့၊ မစုံစမ်းခဲ့။ သားသဘောကျ အတိုင်း လိုက်လျောခဲ့မိသည်။
ကံကြမ္မာ က ကြည်စားလေသလား။ ဒေါ်နွယ်သခင် တွေးမိသည်။
တစ်ချိန်က မောင့်မေမေရှေ့မှာ အပြောဆိုခံ နွယ်သခင်။
ခုတော့ မောင့်မေမေ နေရာက သရုပ်ဆောင်ရမယ့် နွယ်သခင်။
မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မာနနဲ့ သားကို ပိုမြင့်တဲ့ နေရာပို့ပေးရမလား…
တစ်ချိန်က မောင့်မေမေရဲ့ အပြောအဆိုခံ နွယ်သခင်လေး ကိုပဲ ဦးစားပေးပြီး သဘောတူပေးရမလား…
ရင်မှာ ဗလောင်ဆူစွာ ယောက်ယက်ခတ်နေမိပါသည်။
ဒါနဲ့ သားရဲ့သူငယ်ချင်းတွေမှ တဆင့် ချောကလျာရဲ့ နောက်ကြောင်းအခြေအနေကို စုံစမ်းကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့…
လောကမှာ ထင်မှတ်မထားတဲ့အရာတွေက လူတွေကို မျက်လှည့်ပြသလို လှည့်စားတတ်တယ်ဆိုတာပါပဲ…
ချောကလျာရဲ့ အဖေ ဆိုသူက တစ်ချိန်က နွယ့်နှင့် သားကို တစ်ကွဲတပြားစီ ခွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့သူ မောင် (သို့မဟုတ်) ဦးဇေယျာနိုင် ပါတဲ့… ကျက်နေပြီဖြစ်တဲ့ အနာဟောင်းက ပြန်လည်ထိုးဆွခံရသလိုပါပဲ… တစ်ချိန်က ချစ်လှပါပြီပြောပြီး နွယ့်ကိုသာ လက်ခံချင်ပြီး သားကိုတော့ လက်မခံချင်ခဲ့တဲ့သူက ခုတော့ သားရဲ့ယောက္ခမ လုပ်မလို့တဲ့… ဟင်းးဟင်းးး ဘယ်လောက် ရယ်စရာကောင်းပါလိမ့်… အို.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူမကတော့ လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါ။ လုံးဝ မဖြစ်စေရဘူး။ အဟောင်းတွေက အသစ်ပြန်လည်ဖြစ်တည်ပြီး နွယ့်ရင်ထဲက မာနတွေက အုံကြွလာခဲ့ပါပြီ။ ဒီတစ်ခါ နွယ်က အရင်လို စွန့်ပစ်ခံ မိန်းမ တစ်ယောက်မဟုတ်တော့။
အစကတော့ ချောကလျာ နောက်ကြောင်းကို စုံစမ်းပြီး သားသူငယ်ချင်းတွေပြောတဲ့အတိုင်း မှန်ခဲ့ရင်တောင် သားဘက်ကလည်း မခွဲနိုင်ပါဘူးဆိုရင် တစ်ချိန်က သူမလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့တူနေခဲ့တာမို့ မိန်းမသားချင်း စာနာစွာ လက်ခံပေးဖို့ သူမ စဉ်းစားထားပြီးသား။ အခုတော့ အခြေအနေတွေက သူမထင်သလို မရိုးစင်းခဲ့။ တစ်ချိန်က ခေါင်းငုံ့အရှုံးပေးခဲ့ရတဲ့၊ စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရတဲ့ နွယ် ဒီတစ်ခါတော့ ခေါင်းမော့ အနိုင်ယူချင်စိတ်တွေက မရင့်ကျက်သေးတဲ့ သူတစ်ယောက်လို ဆန္ဒပြင်းပြလာခဲ့သည်။
စာ - ၄
ဒါကြောင့် ဦးဇေယျာနိုင် နှင့်တွေ့ရဖို့ သားကို နွယ် စကားဆိုမိသည်။
“ သား… ချောကလျာရဲ့ အဖေနဲ့ မေမေ တွေ့ချင်တယ်…” သားမျက်နှာ မသိမသာပျက်သွားရင်း
“ ဘာလို့လဲ မေမေ… ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ..”
“ သြော်… သားတို့ကိစ္စလေ… မေမေတို့ လူကြီးချင်းတွေ့ပြီး တိုင်ပင်စရာ ရှိတာ တိုင်ပင်ချင်လို့ပါ… အဲဒီနေ့ကျရင် သားနဲ့ ချောကလျာပါ ရှိနေရမယ်လေ… ”
“ ဟုတ်ကဲ့ပါ... မေမေ… သား ချောကလျာကိုပြောပြပြီး ရက်ချိန်းလိုက်ပါ့မယ်”
“ အေး… ကောင်းပါပြီကွယ်… အဆင်ပြေတဲ့နေ့ပြောပေါ့ ”
နွယ့်ကို တွေ့ရင် ဦးဇေယျာနိုင် အံ့သြသွားမှာပေါ့… နွယ်ကတော့ ရင်ထဲမှာ ပြောစရာတွေ အပြည့်နှင့် ဦးဇေယျာနိုင် ရင်ကို အလဲထိုးနိုင်ဖို့ စကားလုံးတွေ ရွေးနေမိပါတယ်… “ တစ်ချိန်က ကျွန်မ ခံစားခဲ့ရသလို ရှင် ပြန်ခံစားစေရမယ်… ဦးဇေယျာနိုင် ” နွယ် အခဲမကြေစွာ ကြိမ်းဝါး မိသည်။
ဒီလိုနဲ့ ဦးဇေယျာနိုင်နဲ့ တွေ့ဖို့ နွယ့်အိမ်မှာပဲ ချိန်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်… ဦးဇေယျာနိုင်က နွယ့်ကို တွေ့ တွေ့ချင်းပဲ
“ ဟင်… နွယ်… နွယ်… မင်း နွယ်သခင် မို့လား ”
“ ဟင်းးဟင်းး သိပ် ဟုတ်တာပေါ့ ဦးဇေယျာနိုင်… ကျွန်မက ရှင် တစ်ချိန်က စွန့်ပယ်ခဲ့တဲ့ နွယ်သခင်ပါ။ ”
“ ဟင်. မေမေ တို့ က သိနေကြတာလား ” “ ဟုတ်လား… ဖေဖေ ”
“ ဟုတ်တာပေါ့… သိတာမှ ရင်းရင်းနှီးနှီးကို သိခဲ့ကြတာလေ… ကဲ ထိုင်ကြပါ… ထိုင်ကြပါ ”
“ ကျွန်မ အခုလို ဦးဇေယျာနိုင်နဲ့ တွေ့ဖို့ ခေါ်လိုက်ရတာက ကျွန်မဘက်က သဘောထားကို ပြောဖို့ပါ… ကျွန်မ ပြောတာကိုပဲ နားထောင်ပေးပါ… ” “ ရှင့် သမီးက ကလေး တစ်ယောက် မိခင်ဆို ”
“ ဗျာ… မေမေ… ဘယ်လိုလုပ် သိသွားတာလဲ ”
“ အေး… သားက မေမေ့ကို ဖုံးကွယ်ထားပေမယ့် သား သူငယ်ချင်းတွေက တဆင့် မေမေ သိခဲ့ရတာပဲ ”
“ ဟုတ်ပါတယ်… နွယ်… သမီးလေးခမျာ… ကံမကောင်းရှာပါဘူး… ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ခင်ပွန်းသည် ဆုံးသွားလို့ စောစောစီးစီးပဲ ကလေးတစ်ယောက်မိခင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်… ကိုယ်တို့ဘက်က ဘာမှ ဖုံးကွယ် မထားခဲ့ပါဘူး… ကလေးတွေကလည်း သားအမေ သိပါတယ်… လို့ပဲ ပြောခဲ့ကြတာပါ ”
“ သြော်… သားက မေမေ့ကို တစ်ပါတ်ရိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကိုး ”
“ အဲလို မဟုတ်ပါဘူး မေမေရယ်… ချက်ချင်းပြောလိုက်ရင် မေမေ စိတ်ထိခိုက်သွားမှာ စိုးလို့ပါ … ”
“ ကဲ… ထားပါတော့… ”
စာ - ၅
“ ဒီမှာ ဦးဇေယျာနိုင်က တစ်ချိန်က ကျွန်မရဲ့သားကို ရှင်နဲ့ ရှင့်အမေ လက်မခံနိုင်ခဲ့တာကို ရှင် မှတ်မိအုံးမှာပေါ့… အခုတော့ ရှင် အသိအမှတ်မပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့သား လူပျိုလေးဆီ ရှင့်သမီး ကလေးတစ်ယောက်မိခင်ကို အပ်တော့မလို့လား… ”
“ အဲလို မဟုတ်ပါဘူး… နွယ်… ဒါပေမယ့် သားကလည်း လက်ခံနိုင်ပါတယ်… ဆိုလို့ပါ ”
“ ဟုတ်ပါတယ်… အန်တီရယ်… သမီးတို့ စတွေ့ကတည်းက သမီးမှာ ကလေး တစ်ယောက်ရှိမှန်း သူ သိပါတယ်… သမီးတို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြီးသားပါ… ”
“ သြော်… သားက လက်ခံနိုင်တယ်တဲ့လား… တစ်ချိန်ကကော ရှင် ကျွန်မကို ဒီလိုပဲ ပြောခဲ့တာပဲလေ… ရှင့်အမေရှေ့ ရောက်တော့ မှ ကျွန်မတို့ သားအမိ နှစ်ယောက် ကို ရှင်တို့သားမိ က ခွဲဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတာမို့လား… အခုတော့ ရှင် စွန့်ပယ်ခဲ့တဲ့၊ ရှင် လက်မခံနိုင်ခဲ့တဲ့၊ ရှင် သား အဖြစ် အသိအမှတ် မပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မသားကို ရှင်က သားမက် အဖြစ် လက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့လေ… သားမက်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုတော့မယ်ပေါ့…. ဟင်းးဟင်း ရှင် သိပ် တရားတာပဲနော်… ”
“ အို…ရှင် ကျွန်မ ရှင်းရှင်းပဲ ပြောမယ်… ကျွန်မသားကို ရှင့်သမီးနဲ့ သဘောမတူနိုင်ပါဘူး… ကျွန်မပြောချင်တာ ဒါပါပဲ ”
“ ဟာ… မေမေ အဲလိုမလုပ်နဲ့လေ… ချော မှာ ဘာအပြစ်ရှိလို့လဲ မေမေရယ်… ”
“ အန်တီရယ်… အန်တီနဲ့ ဖေဖေတို့ အဖြစ်တွေကို သမီးတို့ မသိခဲ့ရပါဘူး.. သမီးတို့ကို မခွဲပါနဲ့ အန်တီရယ်… သမီး ဘာအမှားလုပ်မိလို့လဲ အန်တီရယ် ”
“ မှန်ပါတယ်… သမီး ဘာအမှားမှ မလုပ်ပါဘူး.. အပြစ်လည်း မရှိပါဘူး… အပြစ်မရှိတဲ့ သမီးကို ငြင်းရတဲ့အတွက် အန်တီ စိတ်မကောင်းပါဘူး… ဒါပေမယ့် သမီးကိုတော့ အန်တီ့သား နဲ့ လုံးဝ သဘောမတူနိုင်ပါဘူး… လက်လည်း လက်မခံနိုင်ဘူး… အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သမီးက ဦးဇေယျာနိုင် ရဲ့သမီး ဖြစ်နေလို့ပါပဲ ”
“ကဲ…. ကျွန်မပြောချင်တာ ဒါပါပဲ… ရှင်တို့ ပြန်နိုင်ပါပြီ…. ”
“ မဟုတ်သေးဘူး နွယ်ရယ်… ကိုယ် မှားခဲ့တယ် ဆိုတာ ၀န်ခံပါတယ်… ဒါပေမယ့် သမီးလေးနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး.. သမီးလေးကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါ… သူတို့လေးတွေကို နီးစပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ နွယ်ရယ်… ကိုယ် အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်… ”
“ ကျွန်မ စကားအကုန်ပြောပြီးပါပြီ…. ပြောစရာ စကားလက်ကျန် မရှိတော့ပါဘူး… ရှင်တို့ ပြန်ပါတော့… ကျွန်မ နားချင်ပြီ ”
ဦးဇေယျာနိုင်တို့ သားအဖခေါင်းငိုက်စိုက်ပြီး ပြန်သွားတာကို နွယ်ကြည့်ပြီး ရင်မှာ ကျေနပ်စိတ်တွေနဲ့ပေါ့…
“ မေမေ… မတရားဘူးဗျာ… လုံးဝ မတရားဘူး…. မေမေတို့ ဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ သားတို့က ဘာဆိုင်လို့လဲ… ဘာလို့ သားတို့ကို မြေဇာပင် လုပ်ရတာလဲ ”
“ သားနဲ့ မဆိုင်ဘူးတဲ့လား… အေးလေး သားက မေမေ့ကို အပြစ်တင်ချင်မှာပေါ့… ဒီမယ်..သား… အဲဒီ ဦးဇေယျာနိုင် ဆိုတာ သား မတော်လိုက်ရတဲ့ အဖေပါ… မေမေ့မှာ အခြားတစ်ယောက်နဲ့ရခဲ့တဲ့ သားကို သူ့သားအဖြစ်လက်မခံနိုင်ခဲ့လို့ မေမေတို့ လမ်းခွဲခဲ့တာ… သားအဖြစ်လက်မခံနိုင်ခဲ့တဲ့ သားကို ဒီအရွယ်ထိ မေမေတစ်ယောက်တည်း ရုန်းကန်ကျွေးမွေး ပြုစုပျိုးထောင်လာခဲ့ပြီးမှ သူက အခုတော့ သားမက်အဖြစ် လက်ခံတော့မယ်တဲ့…. မေမေက ဘယ်လို သဘောထားကြီးစွာ သူ့ကို ခမည်းခမက်အဖြစ်နဲ့ လက်ခံရမလဲ….. ”
စာ - ၆
“ မေမေရခဲ့တဲ့ စိတ်ဒါဏ်ရာတွေကို သားက ကုသမပေးဘဲ…. နောက်ထပ် ဒါဏ်ရာတွေ ထပ်ပြီး ပေးအုန်းမလို့လား…ကွယ်…
ဒီတစ်ခါတော့ မေမေထပ်ပြီး မရှုံးနိမ့်ပါရစေနဲ့တော့ ”
“ မေမေ ထပ်ပြီး သတိပေးလိုက်မယ်… ချောကလျာနဲ့ သား ထပ် ဆက်သွယ်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့… မေမေ့ကို နားလည်တယ် ဆိုရင်ပေါ့… မေမေ ဒါပဲပြောချင်တယ်.. ”
သားက သူမကိုကျောခိုင်းပြီး အပေါ်ထပ်ကို တက်သွားပါပြီ… သူမကတော့ စောစောကအဖြစ်တွေကို ပြန်လည်တွေးရင်း ကျေနပ်နေမိသည်။ အိနြေ္ဒမဆည်နိုင်လောက်အောင် ပျက်ကျ နေတဲ့ ဦးဇေယျာနိုင်ရဲ့ မျက်နှာကို မြင်ယောင်ရင်း သူမ အနိုင်ရခဲ့သည်ကို ကျေနပ်နေခဲ့သည်။ သားအပေါ်မတရားဘူးပြောပြော၊ အတ္တကြီးတယ် ပြောပြော သူမကတော့ တစ်ချိန်က သူမကျဆင်းခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ မာန သိက္ခာတွေကို ပြန်လည် အဖတ်ဆည်လိုက်နိုင်ပြီ မဟုတ်ပါလား… ဒီအတွက် သူမရင်မှာ ကျေနပ်စွာ ပီတိဖြစ်နေမိသည်။ သားအပေါ်ချစ်ခင်စိတ်ကြောင့် လိုက်လျောချင်ခဲ့တဲ့ စိတ် နဲ့ ဦးဇေယျာနိုင်အပေါ် လက်စားချေ၊ အနိုင်ယူချင်စိတ်တို့ လွန်ဆွဲနေခဲ့တဲ့ ဒီပွဲမှာ သူမရဲ့မာနတွေက အပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့ပါသည်။ ဒါပေမယ့် သူမ စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်က သားအပေါ်မှားပြီလား… မှားသည် ဖြစ်စေ… မှန်သည်ဖြစ်စေ… သူမရင်ထဲက မာနတွေက သားတို့ချစ်ခြင်းကို မျက်ကွယ်ပြုရင်း ဦးဇေယျာနိုင်အပေါ် အနိုင်ယူလိုက်နိုင်သည့် အတွက် ကျေနပ်ပီတိဖြစ်လို့နေပါတော့သည်။
အောင်နိုင်ခြင်း ဆိုပေမယ့် လည်း
အနိုင် အရှုံး အမှန်တရားတွေနဲ့ 
ဒီရင်မှာ တဆစ်ဆစ်နာလို့ 
မာနတွေ နဲ့ အပြိုင်လှိုင်းထနေတယ် ။
ရေးသားသူ မင်းသျှင် at Monday, December 30, 2013 No comments: Links to this post
Labels: ၀တ္တုတို, ရသ
ရင်ဘတ်နဲ့ တသားတည်း စီးဆင်းနေတဲ့..စာ..ကဗျာ ရင်ဘတ်တူရင်..ခံစားကြည့်မယ်
ချစ်သူများဖြစ်တတ်သော အလေ့အထ(ချစ်သူ စည်းကမ်း)
ကျွန်တော်ဒီနေ့ ကျွန်တော် အမြင်လေတစ်ခုကို တင်ပြပါမယ်.။ ချစ်သူရည်စားတွေ အတွက်ပါ.။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ချစ်သူဖြစ်သွားကြပြီးဆိုပါစို့.။ ချစ်စ...
“ မမနွယ် ကို မေမေ ကတွေ့ချင်လို့တဲ့” နွယ့်ရင်ကို လှုပ်ခတ်စေတဲ့ စကားဖြစ်ပေမယ့် ရင်ခုန်သံကို ထိန်းပြီး “ မောင် ကရော ဘယ်လိုထင်သလဲ… မောင်...
မိန်းမသား ဘာသာအတိုင်း ဒီကောင်းကင်ကြီးမှာ လမင်းကို အသာငေးကြည့် နေတဲ့ ကြယ်ပွင့်လေးပါ.။ ထမ်းပိုးထားတဲ့ သမုဒ္ဒရာတွေရယ်.. လက်ဖဝါးကြမ်းကြမ်း...
နှစ် (၃၀) ခရီးစဉ်
ဟိုးရှေးရှေး နှစ် (၃၀)တုန်းကပေါ့... အမေရဲ့ အသက်စတေးဝံ့တဲ့ ပေးဆပ်မှု အဖေရဲ့ ရင်ခုန်သံ တွေ။ မွေးနေ့ တဲ့ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခု သတိပြု အ...
တစ်ခါတုန်းက တို င်းပြည်တစ်ပြည်မှာ ရှိတဲ့ ဘုရင်ဟာ တိုင်ပြည်ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု့ကို အလေးမထားပဲ. ပျော်ပါးနေလေရဲ့.။တိုင်းပြည်မှာလည်း ဒုက္ခမျိုးစုံ...
“ပစ္စုပ္ပန်အတွက် ဆေးတစ်ခွက်” “ ဆရာမလေး………..ဆရာမလေး ” အပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ လှေကားပေါ်တက်လာတဲ့ မထားကြည် ။ “ ဆရာမလေး ရေ ..ကယ်ပါအုံး ၊ ဆ...
တောင်းတာတွေ ကြောင့်ပြောင်းသွားမှာ စိုးတယ်(၂၀၀ တန်)
လူရာဝင်ဖို့ငွေးကြေးက အမြဲတမ်း ပွဲ ထွက် စာရင်းမှာပါတယ်။ (မင်းသျှင်) 'ဒီနေ့စလုံးက သူငယ...
တစ်ချိန်က....တံငါရွာလေး.. အော်ဘွန်ဟော...၊အော်ဘွန်ပါတို...ခေတ်ကောင်းခဲ့တဲ့မြို့ ဓလေ့.၊ဘာသာ..၊အယူဆ..သူစိမ်းဆန်တဲ့..မြို့ (အဲဒီမြို့..က...
မင်းသျှင်. Simple theme. Theme images by fpm. Powered by Blogger.